Top 10 Android mmekọrịta Managers ka mmekọrịta Ihe niile na android ekwentị / Tablet
1.8 Android mmekọrịta Manager
Ma gụọ 2.3 Android Paswọdu Manager
2.4 Android nkebi Manager
2.5 Android efu Manager
3.0 Android Mmalite Manager
3.1 Android Ohere Manager
3.3 Android oku Manager
3.4 Android Nkpọrọgwụ Manager
3.5 Android ngosi Manager
3.6 Android ebe nchekwa Manager
3.7 Android Desktọpụ Manager
3.9 Android Nchekwa Manager
Ọ bụrụ na ị na-Android ọrụ na onye ịgụ isiokwu na saịtị a, na ị na-ihe a ga-a tech na-agba mbọ onye. Ụbọchị ndụ gị, na na nso-eleta Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, maka na ịchekwa kasị mkpa data gụnyere kọntaktị, ozi ịntanetị, akwụkwọ, music, ihe oyiyi, videos wdg The nsogbu na-amalite popping mgbe ị na-ịmafe ochie Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka onye ọhụrụ, ma ọ bụ mgbe ị chọrọ ka mmekọrịta ụfọdụ dị mkpa faịlụ ka Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. N'agbanyeghị ihe mere ka ị chọọ ka mmekọrịta Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, e nwere ụzọ. Ke ibuotikọ emi, m na-aga na-egosi gị n'elu 10 Android mmekọrịta njikwa ngwaọrụ gị.
Part 1. Top 5 Android mmekọrịta Manager maka PC Part 2. Top 5 mmekọrịta Manager ngwa ọdịnala n'ihi Android Part 3. mmekọrịta Accounts na gị akporo ekwentị na Tablet
Part 1. Top 5 Android mmekọrịta Manager maka PC
A bụ ihe a mbadamba nke Top 5 desktọọpụ software maka syncing gị gam akporo ngwaọrụ gị na kọmputa. Ụfọdụ n'ime ndị a software achọ Wi-Fi njikọ, ụfọdụ pụrụ ịrụ ọrụ site na eriri USB. Lelee nke otu onye suut gị ihe kasị!
Android mmekọrịta Manager WiFi 17,74 MB Free Windows
Wondershare Ewetara gị a dị ike mmekọrịta manịja Android aha ya bụ MobileGo for Android (Windows) ma ọ bụ MobileGo for Android Pro (Mac) ka mmekọrịta kọntaktị, ngwa, music, photos, videos na ndị ọzọ n'etiti Android ngwaọrụ na kọmputa site na iji eriri USB. Na ya, i nwere ike easilyUsing a software, ị nwere ike bulite na ibudata niile ụdị data na kwa jikwaa gị ngwa. Ị nwere ike iwunye ma ọ bụ wepu ngwa, na-eziga SMS, nyefee faịlụ niile formats na-azọpụta a ndabere nke ekwentị gị data na kọmputa gị.
The Windows version-enyere gị aka iji nke a software n'elu WiFi.
Zuru ezu ndabere nwere ike na otu click.
Ọ bụ oké n'ihi music, foto na vidiyo ndị hụrụ nyefee faịlụ na site na Android ngwaọrụ.
Ị nwere ike na-enweta ma izipu ozi ederede kpọmkwem site na kọmputa.
Wụnye, uninstall, na mbupụ Android ngwa ọdịnala na batches.
Import na mbupụ kọntaktị na site na Android ekwentị na-enweghị ihe ọ bụla hassle.
The ikpe-enye bụ free maka naanị 15 ụbọchị. (Ọ na-enye zuru na nke gị).
doubleTwist bụ oké android mmekọrịta manịja windows na Mac. Ị nwere ike mmekọrịta music site na kọmputa gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na a snap. Dị nnọọ ka iTunes maka Mac, e nwere nke a doubleTwist software maka Android. I nwere ike na gị niile music collection haziri, kwado ya na kọmputa gị, denye aha na pọdkastị na ọbụna na-ege ntị na-ebi ndụ na redio. Ọ na-syncs video na photos. Ọ nwere doro nnọọ anya na kensinammuo interface. Ị ga-mkpa na doubleTwist maka mmekọrịta music, video na foto n'etiti Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa n'elu WiFi ma ọ bụ eriri USB.
Easy music, foto na vidiyo syncing ngwaọrụ n'etiti Android na PC.
2. Nza nke smart atụmatụ dị ka nkwanye redio, cover-eruba echiche na Podcast ndekọ.
Bara Uru ọgụ egwu na album ọmụma na-adịghị jikọrọ gafee Web.
3. Android mmekọrịta Manager Wi-Fi
Android mmekọrịta Manager Wi-Fi na-ada gị site Mobile Action. The software na-achọ gị download a ahịa na PC gị na na Android ngwa na ekwentị gị. Mgbe ahụ, data nwere ike synchronized-ejighi eriri site Wi-Fi ozugbo ị jikọọ na netwọk site ịgụ isiokwu a QR Usoro. Ị nwere ike ijikọ gị niile kọntaktị, ozi, photos, video, kalenda, music, ngwa wdg
Ndenye mmekọrịta na nkwado ndabere na usoro.
Ọ na-ekwe data syncing site wireless netwọk.
Ọ na-adịghị inwe ọ bụla mmachi on kpọmkwem faịlụ formats.
The interface bụ a bit mgbagwoju anya na ọ bụghị ezigbo kensinammuo.
New mmelite adịghị maka software.
SyncDroid bụ magburu onwe software maka mmekọrịta gị mkpa onye data n'etiti Android ngwaọrụ na kọmputa. The faịlụ ọ syncs agụnye kọntaktị, SMS, photos, videos, nchọgharị ibe edokọbara, akpọ akụkọ ihe mere wdg The mmekọrịta usoro na-eme site eriri USB, otú i nwere na-eme ka USB debugging mode na-eme otú ahụ.
Na ọ bụ adaba iji. SyncDroid achọpụta ekwentị gị na akpaghị aka installs ekwentị ngwa.
Ọ syncs faịlụ site na data nkwado ndabere na mpaghara mweghachi Filiks.
Ọ bụ dakọtara na fọrọ nke nta niile Android nsụgharị malite Android 2.3 ka 4.4.
Ọ nwere ike ọ bụghị ndabere nile nchọgharị ibe edokọbara na Akwadoo elu naanị ibe edokọbara nke ndabara Android nchọgharị.
The akpaka ndabere usoro ihe omume ọ bụghị mgbe niile nnọọ irè na-enyo na-a bit na-eweta nsogbu mgbe ụfọdụ.
SyncMate bụ Mac software nke na-enye ohere nzi data mmekọrịta na nkwado ndabere gị Android gị Mac. Ọ nwere ihe ndị magburu onwe interface na nnọọ mfe iji. Ọ nwere ike na-mmekọrịta kọntaktsị, kalinda, photos, videos, akwụkwọ, ozi ederede wdg Site na iji adreesị IP gị Android ngwaọrụ.
Ọ bụ nnọọ mfe iji.
Iche iche nke mmekọrịta nhọrọ.
Minor nsogbu gbapụta mgbe ụfọdụ.
Part 2. Top 5 mmekọrịta Manager ngwa ọdịnala n'ihi Android
E wezụga na desktọọpụ Android mmekọrịta manịja Mac na Windows, ndị a nwekwara ụfọdụ oké Android égwu na Google Play ụlọ ahịa, nke nwere ike ijikọ gị niile dị mkpa data, kwado ha wee bulata ha bụrụ na nke mberede. Lelee a na tebụl na họrọ gị ghota!
Mmekọrịta Manager 641 KB Free
Akụkụ mmekọrịta 3.0 10 MB Free
Ozi mmekọrịta 84 KB Free
CalDAV-mmekọrịta 1.1 MB $2.86
1. mmekọrịta Manager
Mmekọrịta Manager maka Android na-ada gị site Acarasoft. Nke a bụ ahịa WebDAV. Iji a ngwa, ị nwere ike ijikwa WebDAV mbak, download na bulite faịlụ na hazie faịlụ niile formats. The akwado sava na-GMX MediaCenter, IIS 6, 7 na 8 maka Windows Server 2003, Windows 7 na Windows 8 karị.
Easy faịlụ syncing ọrụ.
Nza nke na-ezighị ezi reviews.
Freezes mgbe syncing.
Mgbe ụfọdụ na-ewe ogologo ka mmekọrịta karịa ntuziaka syncing.
Download mmekọrịta Manager si Google Play Store >>
2. nchekwa mmekọrịta Lite
FolderSync bụ ihe magburu onwe ngwa n'ihi na syncing gị data ka a ígwé ojii dabeere nchekwa ọrụ. Ọ na-akwado dị iche iche ojii nchekwa sava gụnyere Dropbox, OneDrive, SugarSync, BitCasa, Google Docs wdg The faịlụ syncing usoro bụ effortless na gị niile dị mkpa music, foto na akwụkwọ ga-kama uploaded ka ojii nchekwa site na ekwentị gị.
Ọ na-ekwe na-ebugote data ka a ukwuu nke ojii nchekwa sava.
Kemgwucha mfe iji na-eju afọ arụmọrụ.
Mgbe ụfọdụ data syncing freezes.
Ọ na-adịghị akwado mkpebi niile ngwaọrụ ụdị.
Download nchekwa mmekọrịta Lite si Google Play Store >>
3. Akụkụ mmekọrịta 3.0
SideSync bụ ihe ịtụnanya data mmekọrịta ọrụ dakọtara na Samsung Galaxy mbadamba na smartphones. Ọ na-ekwe gị ịkọrọ data, ákwà na windows na ngwaọrụ ndị ọzọ na ọbụna PC. Iji SideSync 3.0, ị nwere ike igba gị gam akporo ngwaọrụ ihuenyo gị PC ma si otú nyefee ụdị ọ bụla nke data site Ịdọrọ na idobe. Ihe kacha mma banyere SideSync bụ na ọ na e mere site nnyocha na mmepe ìgwè ndị Samsung, gụnyere top klas ngwa mmepe na ndị injinia.
Ọ na-ekwe n'ife ngwaọrụ ngosi ka PC ngosi.
Ma USB na Wi-Fi Njikọta akwado.
Ọ na-akwado keyboard na òké òkè.
Ọ na-arụ ọrụ na Samsung Galaxy ngwaọrụ.
Ọ bụ dakọtara na ọhụrụ Samsung Galaxy Tab S.
Download SideSync 3.0 si Google Play Store >>
4. Ozi mmekọrịta
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Android mmekọrịta ọrụ ịrụ ọrụ dịgasị iche iche, nke a karịsịa otu enyere iji mekọrịta naanị gị ozi ederede. E nwere nza nke dị iche iche ngwa ọdịnala n'ihi syncing gị ederede ozi, ma nke a bụ nnọọ ndị kasị simplistic obibia a enweghị ntụpọ arụmọrụ site na a ozi mmekọrịta ọrụ. Gị niile bara uru MMS na SMS nwere ike mfe kwadoo ma weghachi na iji Ozi mmekọrịta ngwa n'ihi na Android. I nwekwara ike mbubata SMS si XML bupu nke MyPhoneExplorer ngwa.
Easy na nkwado ma weghachite Filiks n'ihi MMS na SMS.
Mmekọrịta nhọrọ na-edochi aga na faịlụ na ike mmadụ na mberede hichapụ ihe niile ozi gị.
Download Ozi mmekọrịta si Google Play Store >>
Onye a bụ a CalDav ahịa nke na-enye ohere gam akporo ọrụ iji mekọrịta kalenda ihe na aga-eme. Ọ ọrụ dị ka a mmekọrịta nkwụnye na n'ụzọ zuru okè integrates na ngwaahịa kalenda ngwa. Ọ na-akwado ihe aga-eme, onwe-aka asambodo, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke CalDav akaụntụ, na akpaaka provisioning, akpaka kalenda mmekọrịta, webcal ICS azụ wdg Mgbakwụnye na-akwado Android 4.1 na n'elu.
Na-akwado a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke CalDav-mmekọrịta sava gụnyere DAViCal, Zimbra, iCloud, ownCloud, SOGo wdg
Ọ nwere ọrụ enyi na enyi interface-eji ire ụtọ ịrụ ọrụ.
Ọ na-adịghị akwado ndị ọhụrụ tọhapụrụ Android version - KitKat.
Download CalDav-mmekọrịta si Google Play Store >>
Part 3. mmekọrịta Accounts On Your akporo ekwentị
Otu n'ime ọtụtụ nsogbu na ị na-eche ihu mgbe ịmafe ha ngwaọrụ ma ọ bụ mgbe a factory nrụpụta nke ekwentị syncing gam akporo ma ọ bụ Google akaụntụ. Ka lelee a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu na otú i nwere ike ime ya na gị na Android ekwentị, n'agbanyeghị gị Android version.
Nzọụkwụ 1. Gaa Ntọala menu na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ nwere ike na-enweta site na ngosi Bar ma ọ bụ site App Igbe.
Nzọụkwụ 2. Lezienụ anya maka ndị Accounts & mmekọrịta nhọrọ ma ọ bụ nanị Nnabata nhọrọ ke Ntọala menu.
Nzọụkwụ 3. Chọta na họrọ Tinye Akaụntụ nhọrọ.
Nzọụkwụ 4. Họrọ ọrụ maka nke ị chọrọ tinye ihe na akaụntụ. Ọ pụrụ ịbụ Facebook, Dropbox, Gmail, Evernote wdg Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ ka mmekọrịta gị Android akaụntụ, mkpa ka ị họrọ Google.
Nzọụkwụ 5. Ị ga-jụrụ n'ihi a Aha ojii ma Paswọdu.
Nzọụkwụ 6. Mgbe ahụ, mmekọrịta Ọkachamara ga-eduzi gị na usoro ahụ nke syncing kpọmkwem ọdịnaya na gị Android Akaụntụ.
Step7. I nwekwara ike mmekọrịta multiple Google akaụntụ site n'inye ozi akaụntụ eso otu nzọụkwụ kwuru n'elu.
E nwere ọtụtụ narị data syncing ọrụ dị maka Android, ma ọ bụghị ha niile inye ndị kasị mma onye ọrụ ahụmahụ. Dabere na gị mkpa, i nwere ike a pụrụ iche software ma ọ bụ ngwa maka syncing gị android ngwaọrụ. Anyị mere na sorting n'ihi na ị ma kpọpụta ndị kasị mma na ndabere nke ha atụmatụ na onye ọrụ nzaghachi.
Ndabere kọntaktị site na akporo ekwentị Mfe
Ndabere SMS si gam akporo na ekwentị PC
1 Pịa ndabere & Weghachi akporo ekwentị
Ndabere ọdịnaya site Android ka PC
Copy Files si gam akporo ka iPhone
Mbubata / Export Ndi ana-akpo ka / site na akporo ekwentị
Bugharịa faịlụ site iPhone ka Android
Best 5 Alternatives ka Samsung Kies
Gụọ a Tupu Ị Tinye Samsung Iweghachite ọnọdụ
> Resource> Android> Top 10 Android mmekọrịta Managers ka mmekọrịta Ihe niile na gam akporo Ngwaọrụ